Amasu Aphephile Asetshenziswe Nguhulumeni Ukuvikela Ipulathile Yekhamera Yomzimba-Worn | Izixazululo ze-OMG
Amasu Aphephile Asetshenziswa Nguhulumeni Ukuvikela Ipulatifomu Yekhamera Yomzimba
Ubuchwepheshe obugqokwa ngumzimba bube wusizo olukhulu kuhulumeni ekugcineni imigomo enokuthula phakathi kwezinhlangano zomthetho nezakhamizi. Kube yindlela yokwenza inkundla yokudlala ivuleke, okwenza kube lula kakhulu ukuthi izinhlangothi zombili zicele izijeziso zenkantolo lapho izinhlangothi zombili zifuna ukuphindiselwa. Kungenzeka ukuthi iphoyisa lisebenzise umfutho ngokweqile futhi ngokungadingekile ngenkathi besebenza nesakhamuzi, bangase bakhethe ukufaka amacala bese kuthi ngaphandle kobufakazi, kube nzima kakhulu kubo ukuthola ubulungiswa ngokuhlukunyezwa. Ngezinsimbi zomzimba ezethulwe nguhulumeni nezinqubomgomo abazidlulisile besebenzisa zona, kuzwakala izwi lomuntu ojwayelekile ngaphandle kwamandla futhi kuzobulungiswa ubulungiswa. Ukuba nekhamera ezungezile kuhlale kudala lokhu “kuzibona” kubantu ngokuvamile, kwenza amathuba abo okuphatha kabi noma enze ngendlela engamukeleki kangako. Ngokwenza ukuthi abenzeli bezomthetho bagqoke ikhamera njengoba benza imisebenzi yabo, ikwazile ukubheka futhi yazi ukuthi kwenziwa ini umsebenzi uma kwenzeka kuphenywa, futhi kukhona nezinkundla zokudlala okufanele kuqondwe ukuthi zinjani isimo sangempela okwenzeka ngempela. Kuze kube manje ilungu le-ejensi, linamathela ezinqubomgomo futhi ungazephuli-ubumfihlo, ngakho-ke ngeke kube nenkinga futhi futhi akunasizathu se-alamu.
Ngemuva kwokwenzeka e-US, lapho intombazane emnyama engenazibhamu yadutshulwa ngamaphoyisa. Kuvele amanye amacala kanti lokhu sekufinyelele ezweni lonke impikiswano ephathelene nokusetshenziswa kwamandla abulalayo ngamaphoyisa. Lokhu kungenye yezingqinamba ezaletha ukuxazululwa kwengxabano, ukuphuculwa kokuziphatha kwamaphoyisa kanye nokuphepha futhi nokumise izinsolo zokubala ukuthi le mibiko iphenduka kanjani. Umqondo wokusebenzisa amakhamera ukuqopha izehlakalo awulona neze ulutsha njengoba kuyiqiniso eminyakeni eyishumi edlule, amakhamera afakiwe ezimotweni zamaphoyisa ukuze nje abe neso lezinto azenzayo. Kodwa-ke, uhlelo olubandakanya amaphoyisa agqoke amakhamera ngobunono luyisengezo esisha, eminyakeni ethile edlule amazwe ambalwa nje emhlabeni amukela kwezinye izifundazwe zawo. Kepha esikhathini sakamuva e-US 6000 yamaphoyisa cishe ase-18000 manje ayayisebenzisa, izibalo ziya ngokuqhubeka zikhula ngokuqinile futhi nezinqubomgomo ezintsha ziyaqhubeka zithunyelwa ngenkathi izaguga zigcina ziguqulwa, konke ngenhloso yokusebenzela umphakathi ngenkathi wenza umsebenzi lula emaphoyiseni.
Umnyango Wezokuphepha Kwasekhaya (i-DHS) usungule uhlelo lokuhlola kanye nokuqinisekiswa kohlelo lokuphendula kuqala ukuze luqinisekise ngokwejwayelekile, bayangena kule mishini yokuhweba futhi baqiniseke ukuthi bayasebenza. Ukuncoma kwabo ngobuchwepheshe bokusebenzisa ngukuthi:
Ividiyo kufanele ibe nesilinganiso sozimele okungenani sama-25 ozimele ngomzuzwana (fps)
Ibhethri lekhamera elisebenzayo kumele lisebenze okungenani amahora angama-3 ngaphandle kokushona
Ukulungiswa kwesithombe kumele kube ubuncane be-480p ie i-640 X 480
Uhlelo lwekhamera kumele okungenani lube nesiqinisekiso sonyaka owodwa kunoma iyiphi inkampani ethengiwe kuyo
Isitoreji sekhamera kufanele sikwazi ukuthwebula ubuncane bezithombe ezingamahora ama-3 uma sisethwe kusethingi yaso encane
Ikhamera kufanele ibe nesilungiselelo esithile sokukhanya okuphansi esivumela ukuqoshwa okulula ngisho nalapho kungekho kukhanya.
Ezinye izincomo zanikezwa maqondana nezinkinga ezithile ezithile; kukholelwa ukuthi amakhamera ajwayelekile azoba nezinkinga ezithile zekhwalithi ngokwesibonelo: izithombe ezixakile nekhwalithi ephansi ebusuku. Lezi uma ziqhathaniswa namakhamera wezobuchwepheshe wonke abonakala entuleka nganoma imuphi umqondo njengoba eseshaywe afinyelela kulokho akusebenzayo ukuze kulondolozwe izindleko. Kungabakhona nezinkinga zokuqina ikakhulukazi uma iphoyisa lijahile, lezi zenze ikhamera eyinhloko yanconywa ngezizathu ezinjengalezi ngoba ikhanda lisebenza njenge gyroscope elilungisa ukunyakaza okuthile okubangela lokhu kungazinzi. Ukuqhubekisela phambili ukukhula kwamakhamera agqokwa ngumzimba kulethe izinzuzo zomphakathi wonke njengoku:
Ukungafihli ebudlelwaneni phakathi kwebutho nezakhamizi
Ubungcweti obukhulayo njengoba izikhulu zenza umsebenzi wazo ngezindlela zobungcweti ezingaphezulu
Ukuhlangana komphakathi okuthula okwengeziwe, lokhu kubandakanya ubuhlobo obuhle ngaphandle kodlame
Ukulondolozwa imali eningi obekungase kuchithwe ekuphenyisisweni kwezindaba zangaphakathi ngamacala okwenziwa yisikhulu ngenkathi kubuye kulungiswe necala elibhekene nokusetshenziswa kokulahleka okungadingekile
Njengoba inzalo kubuchwepheshe be-cam cam ibonakala ikhule, kanjalo nayo inemibuzo eminingi ngokusetshenziswa kobuchwepheshe ikhuphukile futhi iphinde iphenyisiswe ngezinqubomgomo eziyihambisa. ngohlelo olunjengalolu, kuyaziwa ukuthi amakhono okuphatha amaphrojekthi abaluleke kakhulu, ezinye izinselelo nazo zibhekene nalabo abaphethe. Kubandakanya inani elikhulu lesitoreji esidingekayo ukugcina la marekhodi kanye nesidingo sokuwagcina ngokucophelela. Yilapho-ke isitoreji samafu singena khona, kepha lobu buchwepheshe buzofunwa nje ngabo. Amakhamera agqokwa ngomzimba athonya eminye iminyango yamaphoyisa njengezinhlelo ezisizwa ngamakhompyutha nezinhlelo zokulawulwa kobufakazi. Inselelo enkulu esivame ukuyinikezela yindleko yokugcinwa kwedatha ebangelwe yi-PERF iye kuma-dollar ayizigidi ezingama-2 ngonyaka.
E-UK e-2006 ngenkathi kwethulwa ikhamera egqokwa ngumzimba, kwaba noshintsho olukhulu ezintweni eziningi kanye nokusetshenziswa kwamandla ngokungadingekile ngenkathi ukubanjwa kwehliswa yi-60%, ubuchwepheshe bubuye bukhuphule ukuqoqwa kobunzima bokuphika ubufakazi obuholele ekumbalwa amacala adinga ukuqulwa kwecala. Amaphoyisa asebenzisa ukusetshenziswa kwamakhamera angavimbeli amanzi, aqoshwa ngevidiyo ngombala ogcwele futhi ayenempilo yebhethri cishe amahora angama-12. Umphumela ngemuva konyaka kusukela ekusetshenzisweni wawuphawuleka ngempela; ukucaca nobungcweti kukhuphuke kakhulu, izikhalazo ezibhekene nezikhulu zaze zawa nge-90%. Lokhu kubuyekezwa okuhle kusenesikhathi, kunikeze ukwamukelwa nokuzalwa kwamazinga kanye nokwakhiwa kwezinqubomgomo zobumfihlo njengoba ngokushesha kwaba yinkinga lapho kuphakama izikhalazo ngokwephulwa kwemfihlo. Sekukonke ubuchwepheshe obukhethwe ukuthi bugqokwe bungafanele ukuba bube nesisindo, kufanele bube nesisindo esincane ngoba buzoba yinkinga uma isisindo siba sobala. Amakhamera ayegqokwa ezingxenyeni ezihlukene zomzimba kubandakanya; ikhanda, ihlombe nesifuba. Amaphoyisa kwadingeka ahlole amagiya ahlukahlukene ngaphambi kokuthola ekugcineni ukuthi yikuphi okuhambisana nezigqoko zawo nezibuko. Lapho igqoke ikhamera yomzimba ekhanda, iqopha noma yini iphoyisa eliyibukayo. Kuhle kakhulu nokujaha njengoba ikhanda lisebenza njenge-gyroscope enciphisa ukungazinzi kwekhamera, kuyilapho ngokugqoka ehlombe noma esifubeni inzuzo ukuthi iqopha noma yini ephambi kwesikhulu noma ngabe ayibheki. Ama-ejensi wokumisa ngokwejwayelekile abefuna ukuthi ikhamera ikwazi ukufaka ilebula yomcimbi ngezinsuku nangendawo nendawo uma kungenzeka, ngaphandle kwalokhu okulebula levidiyo kungasebenzi ngokuphelele ophenyweni.
Lapho umnyango wamaphoyisa aseCalifornia uqala ukukhipha amakhamera omzimba, enza ukuthi izikhulu ziqaphele ukuthi amaminithi we-30 wokuqopha yi-800mb yendawo yokugcina izinto. Ngaleso sikhathi ukuyibala; uma ngabe babeneziphathimandla ze-200 futhi badinga ukuzigcina kubo, ngonyaka bazodinga cishe i-33Tb yesitoreji. Lokhu kukhulu impela futhi amakhamera agqokwa ngomzimba angabalwa ukukhiqiza idatha eminingi yevidiyo futhi imethadatha ukulandelela nokuphatha iziqeshana zevidiyo ngama-Keepakes nenhloso yokuboshwa. ezimweni ezixhuma namakhamera omzimba, inqubomgomo ixhunyaniswa ngokungalingani embuzweni wokuthi ingagcinwa kuphi idatha enkulu eqoqiwe. Izinqubomgomo ngokugcinwa empeleni zingadlala usizi engxenyeni yesabelomali esabiwe kumakhamera agqokwa ngomzimba. Kwezinye izindawo, kulindeleke ukuthi ayikho idatha yobufakazi okumele isuswe phakathi kwe-60-90days. Abanye bacele ukuthi inyuswe kanti abanye bacele ukuthi yehliswe. Amadolobha amaningi abefuna ukusebenzisa amakhamera agqokwa ngumzimba athole inkinga yokugcinwa kwedatha abahlangabezane nayo, njengethonya elibavuselele amandla futhi labavimba ukuthi bangaqhubeki nalolu hlelo yize bebethanda ukuluqalisa. Uhlelo lwezobulungiswa lukazwelonke selusho ukuthi ama-video abaluleke kakhulu emnyangweni wamaphoyisa futhi nalolo shintsho lokulungiswa kuzodingeka lwenziwe.
Ubuchwepheshe befu kube yisixazululo esikhulu senkinga yokugcinwa kwekhamera egqoke umzimba kepha ayikaze yenziwe njengoba ingazange ihlangabezane nesidingo se-FBI's information information services (CJIS). Ezikhathini zamuva nje isimo siyashintsha manje njengoba ezinye iziqhwaga zobuchwepheshe manje zinikezela ngesitoreji samafu esihlangabezana ngqo nesidingo se-FBI esingazange sihlangane ngaphambili esivimbe ukusebenza kwawo ngokuphelele. Ezinye izinzuzo zobuchwepheshe befu yilezi: scalability, ukufinyelela emisha nokwenza izindleko. Ifu libeka ngokuphelele izinkinga zesitoreji esibonwe ngaphambili okwenza kube yisixazululo sokunciphisa izindleko ukwenza ubuchwepheshe bekhamera egqoke umzimba buqaliswe kangcono.
Amasu Aphephile Asetshenziswa Nguhulumeni Ukuvikela Ipulatifomu Yekhamera Yomzimba igcine ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4591 Ukubuka kwe-1 Namuhla